ट्याग: टीम निर्माण
आइतबार, अक्टोबर 25, 2009 बुधबार, फेब्रुअरी 10, 2016 एडम सानो
पढ्ने समय:2मिनेट म एक महिना वा अधिक को लागि कार्यको लागि केहि ईमेल राख्नुको बरु खराब बानीमा पर्दछु। आउने ईमेलहरूका लागि मसँग ट्राएइज प्रणाली छ। यदि उनीहरूलाई मेरो तात्कालिक ध्यान वा कार्यको आवश्यकता पर्दैन भने कुनै प्रकारको पीडा हुनबाट बच्न, म बस तिनीहरूलाई बस्न दिन्छु। हुनसक्छ त्यो नराम्रो चीज हो। वा हुन सक्दैन। यो सम्पूर्ण विषयले मलाई एक साथीसँग मिस्ने काम गर्यो (मेरो "प्रतीक्षा अवधि" को शिकार)
पढ्ने समय: <1 मिनेट अन्तिम पटक कहिले हो जब तपाइँ तपाइँको इ-मेल प्रोग्राम पुन: बनाउनु हुन्छ तपाईको इ-मेल सूची सही रूपमा सेगमेन्ट गरिएको छ र सब्सक्राइबरहरूले आफूले चाहेको जानकारी पाइरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न? यति धेरै मार्केटरहरू मात्र ठूलो ग्राहक गणनामा ध्यान दिन्छन्… साना ईमेल सूची र लक्षित सामग्री जहिले पनि सामूहिक मिडियालाई प्रदर्शन गर्दछन्। यहाँ उत्तम रखरखाव ईमेल छ, जुन वेबट्रेंड्सबाट प्राप्त भयो: विषय राम्ररी विभाजित छन् र मेरो प्राथमिकताहरू अपडेट गर्न एकल क्लिक मात्र थियो। यदि तपाईं ग्राहकहरूको प्राथमिकता क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ
पढ्ने समय: <1 मिनेट लक्षित स्वत: प्रतिक्रिया जुन म ई-मेल, सामाजिक नेटवर्कहरू र माइक्रो-ब्लगहरू मार्फत प्राप्त गरेको सबै अनावश्यक संलग्नताहरूको लागि छोडिदिन चाहन्छु: म तपाईंलाई चिन्दिन। गम्भीरतापूर्वक। तिमी मसँग किन कुरा गर्दैछौ? तिमीले मलाई कसरी भेटायौ? के मैले तपाईंलाई मेरो अनुमति दिए? के मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ कि म तपाईंको उत्पादन वा सेवामा इच्छुक छु? के तपाईं मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईंले गर्नु भएको थियो? केहि पनि प्रासंगिक हुन सक्छ? के तपाई साँच्चिकै चिन्नुहुन्छ?
पढ्ने समय:2मिनेट तपाईंको ईमेल परिणाम उत्तरदायीता र कुशलतापूर्वक मार्केटिंग शेर्पाको २०० Email ईमेल मार्केटिंग बेचमार्क गाईडको साथ बढाउनुहोस्। व्यवसायले प्रभाव अधिकतम पार्ने र सम्बन्ध निर्माण गर्न लागत प्रभावी तरीका खोज्छ जुन सम्भावना वैश्विक अर्थतन्त्रमा हुन सक्छ। र ईमेल एक धेरै जसो प्रयोग भएको र दुरुपयोग गरिएको तरीकाहरूमा जारी रहन्छ जुन विपणकहरू उनीहरूको ग्राहक आधारका साथ कुराकानीमा फर्कन्छन्। तर तपाईको इ-मेल प्रदर्शन बढाउने एक मात्र तरीका जिम्मेवार र प्रभावकारी बजार हो।
शनिबार, अप्रिल 19, 2008 शनिबार, अप्रिल 19, 2008 Douglas Karr
पढ्ने समय: <1 मिनेट उनीहरूले मेरो घरको केहि माईलमा बार्नेस र नोबलहरू निर्माण गरे र यो साँच्चिकै आश्चर्यजनक स्टोर हो। जहाँसम्म वास्तवमै मेरा पुस्तकहरू फेला पार्न म सधैं कठिन समयको रूपमा लिन्छु। किनाराहरूसँग उनीहरूको शेल्फहरू मिलाउने अधिक सीमित साधनहरू देखिन्छन्। जे भए पनि, म दुबै स्टोरहरूको आनन्द लिन्छु तर मैले आफूलाई बार्नेस र नोबलहरूमा बढी फेला पारेको छु किनकि उनीहरूसँग एक स्टारबक्स छ जुन एटी एन्ड टीसँग वायरलेस छ। म गएको छैन